lundi, 04 février 2019 12:08
Ivato sy Marais Masay: Vehivavy roa hita faty amin’ny fomba mampiahiahy
Androany avokoa no nahitana ireto tranga ireto. Vehivavy iray no hita faty natsingevan’ny rano teo Marais Masay, Antananarivo V. Mbola nahitana vola, finday tany aminy.
Vehivavy zokiolona iray ihany koa hita faty teny Fitroafana, Fokontany iray ao amin’ny Kaominina Talatamaty, Distrika Ambohidratrimo.
Morondava: Midanika ny hafanana
Mafana be ny andro eto an-drenivohitry ny Faritra Menabe. Efa ho efatra andro izao no toy izao ny toetr’andro eto.
Misedra fahasahiranana noho izany ireo be antitra sy marefo ara-pahasalamana.
Morondava: Lavon’ny Polisy i Tody, jiolahy nikoizana
Tra-tehaky ny Polisy teto Tsimahavaobe Morondava ny alahady 03 febroary 2019 i Tody, rehefa ela nikarohana azy. Malaza ratsy amin’ny vaky trano sy vono olona ato amin’ny Faritra Menabe sy Melaky i Tody.
Halatra fitaovana informatika no manavanana azy, ary tsy mandre izay ambonin’ny tany ny olona ao amin’ny tokantrano tafihiny.
Lehilahy sahabo ho telopolo taona avy eny Ankilivalo, Distrikan’i Mahabo i Tody. Efa nigadra noho ny asa ratsy nataony. Namaly ny Polisy izy io omaly io noho ny fitaovana nananany, dia basy vita gasy iray mifahana bala, miampy « pince » sy lakile maromaro. Nampiasa ny fitaovana teny aminy ny mpitandro ny filaminana.
Tsimbazaza: Fivoriambe anoloran’ny Praiminisitra ny fandaharanasany ho fampiharana ny Politika ankapoben’ny fanjakana
Ho fampiharana ny andininy faha-99 amin’ny Lalampanorenana, ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta dia manolotra ny fandaharanasany manoloana ny Parlemanta ho fampiharana ny Politika ankapoben’ny fanjakana ao anatin’ny telopolo andro taorian’ny nanendrena azy. Afaka mandroso sosonkevitra amin’izany ny Parlemantera.
Tanterahina amin’izao tapakandro maraina izao ny eny Tsimbazaza, ary ny tapakandro hariva ny ao amin’ny Antenimieran-doholona.